Musha | Chikoro che Oakleigh uye The Early Years Intervention Center
Zvirongwa zveMutariri wenguva yezvokudya panguva yeSchoolleigh School - Kumbira Iye zvino!
Vacancies ye TA (L2) paAcorn Colindale School - Isai Zvino!
KUVA ZVAKABATSIRA TINOGONA KUVA
Kugamuchirwa kuWorldigh School uye The Early Years Center
"Sezvo Headteacher weSchoolleigh School uye Early Years Intervention Centre, ini ndine shungu uye ndinozvipira kupa vana vedu mashoma ekudzidzisa nekudzidza mikana zuva rega rega" Kuve zvakanakisisa zvatinokwanisa kuva 'hakusi kungoti chikoro, ndizvo chaizvo chinangwa chebasa iro vashandi uye yedu yakawedzerwa mitambo yevanachiremba uye vashandi vanoshuva kune umwe neumwe nemwana nemhuri.
Tinoita kuti mwana mumwe nomumwe ave nepurogiramu yega yega yekudzidzisa iyo inosanganisira nzira yekukurukurirana uye inovamanikidza kuti vaite zvavanokwanisa. Chinangwa chedu kunze kwekupa nheyo yakasimba yekudzidza ndechekuvimbisa kusununguka kwakawanda sezvinobvira kuvabatsira muupenyu hwevanhu vakuru. Dare rakakura mukati mechikoro rinoshanda pamwe chete nemhuri kuti rive nechokwadi chekuenderera mberi kwekufambira mberi kwevana vanoita. Isu tinozvirumbidza mukuchengetedza chikwereti che 'Zvakanakisisa' chikamu pamwe neGold Star Award nokuda kwerongwa rekufamba kwedu kuchikoro. Chikoro che Oakleigh chakazvipira kupa zvakanakisisa zvatinokwanisa kumwana wese nemhuri dzinouya pano. "
Headteacher paWorleigh School
Kubatsira vana nevechidiki neZvinodiwa Nezvidzidzo Zvepamusoro uye / kana Kuremara nemhuri dzavo kuwana ruzivo uye rubatsiro rwavari kutsvaga.
Autumn Nguva Matambo
Muvhuro 2 September Inset Day
Chipiri 3 September Inset Day
Chitatu 4 September Children In
Chishanu 18 October End Ends
Muvhuro 28 October Children In
China China 19 December End Ends
Kutevera kushanyira kuchikoro pa 12 June 2019 Ofsted Vatsvakurudzi Penny Barratt & Barney Geen, Penny akanyorera kuMudzidzisi Mudzidzisi Ruth Harding panzvimbo yaMambo Mukuru weChipiri Inspector we Dzidzo, Children's Services uye Skills kuti ataure kuwanikwa kwekuongorora.
Ona Short Inspection Report
Chiitiko chepachena pa Natural History Museum
Dawnosaurs ihwo chiitiko chekusununguka kwevana pa autism spectrum kuti inakidzwe neMusamusi nemhuri dzavo nehanzvadzi, pasina rusununguko rwevanhu vose.
Iwe unogona kushandisa paIndaneti kune imwe nzvimbo kwemavhiki matatu kusvika mana mushure mechiitiko chimwe nechimwe.
Dawnosaurs inotevera ichaitwa pa15 Zvita 2019.
Nharaunda dziri mukuderera zvakanyanya, uye mberi zvichapiwa kune vekutanga nguva.
Tsvaga zvimwe ...
Waiziva here kuti iwe unogona kubatsira PSA yedu inonakidza nekukonzera usiku kunze kweku UK? Nyora tafura uchishandisa Charitable Bookings uye £ 1 munhu wese achapiwa neresitorendi ku Oakleigh School PSA, zvose pasina zvakakwana kwauri!
Dhaunirodha purogiramu yakasununguka NOW (£ 1 inowanikwa yePSA chimwe nechimwe nguva iyo purogiramu inoshandiswa, kunyange pasina mabhuku akashandiswa) nekusimudza mari nguva yose yaunodya! Panewo makwikwi ezuva rimwe nerimwe okukunda mikomborero mikuru pane app!
Zvinyorwa zvehurukuro paCheritable Bookings
Chikoro chechikoro Chikoro chepaIndaneti!
Chikoro che Oakleigh ikozvino chinoshandisa Tucasi, iyo yekubhadhara paIndaneti system, iyo inobvumira kudya kwechikoro, mari yekufambisa uye yunifomu yechikoro inofanira kubhadharwa paIndaneti uchishandisa kubhadhara kana kadhi rechikwereti.
Iwe unogonawo kushandisa kero yako kune mamwe mabasa akadai kuvandudza mashoko ako ekutambira kuti uwane ma-email kana mameseji kubva kuchikoro, uye uchitarisa chikafu chekudya kwevana vako.
Kuti uwane mamwe mashoko chinyorwa paya paunobatanidzwa pasi apa.
Mamwe mashoko ...
Heino dzimwe nzvimbo dzekuenda kune mazano kumhuri ine vana vakwegura:
Kana iwe uchida zvakakwana zvekuchengetedza mazano evhudziro kana kuti rubatsiro nemavabereki ekugadzirisa zvirongwa zvekutengesa mumba mako kana zvigadzirwa, wadii kushevedza NSPCC / O2 mubereki wekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwepaIndx 0808 800.
Kune purogiramu yakaisvonaka yebhetheni kubva paIndaneti Matters yakavakirwa kubatsira vabereki kuti vataure pamusoro pekuchengetedzwa kwepaIndaneti nevana vavo. Ingo tsvaga Indaneti Matters pane purogiramu yebhuku.
Tsvaga NSPCC NetAware pane purogiramu yepurogiramu yepurogiramu yakanakisisa ye "app about apps" nekunongororwa kwemasero ese, mapurogiramu nemitambo iyo vana vako vari kutamba (asi vabvunze kutanga kuti muongorororwe!).
Tarisa parentsafe.lgfl.net kuwana hukama kune zvose zvataurwa pamusoro apa, pamwe nemigumisiro yemhuri (zvichida dzivisa dzimwe nharo!), mazano ekupedzisira kwekanguva yenguva (pane nguva yekrini uye nguva yekuvhara-iwe unogona kunge uchizvidya mwoyo kwazvo) nezvimwewo kunze.
Tarisa hukuru-hukuru 'Gara Wakachengeteka PaIndaneti' Chikwata
LGfL Online Security Resource
Dzvanya pane yakashinga / yakatsikiswa zuva kuti uone chiitiko.
Wona kalendari izere pano
Explorer Dome inoshanyira Oakleigh!
Bamboozle huya kuOakleigh
Nzira Yekuchengetedzwa Kwemugwagwa 2019
Carousel picha dzakatorwa ne Photoface & Mona Naem Photography